Ireo Bilaogera Sinoa miresaka Sivana, MSN, Sns. · Global Voices teny Malagasy
Ireo Bilaogera Sinoa miresaka Sivana, MSN, Sns.
Voadika ny 24 Desambra 2019 18:09 GMT
Tao amin'ny CNBlog, milaza i Isaac: “Aza mampiasa ny MSN Spaces,” ary mamorona tenifototra NoMSN Technorati ho an'ilay hetsika fanaovana ankivy.
Mamoaka pikantsary tao amin'ny Flickr izay mampiseho valiny mitovy amin'ny hitako i Kaihong : Voasivana ny lohatenin'ilay bilaogy, saingy afaka namoaka teny saropady tao anatin'ny votoatin'ilay bilaogy izy.
Manoritsoritra ny dingana fisoratana anarana ao amin'ilay tranonkala i Wangjianshuo (amin'ny teny Anglisy). Milaza izy fa “efa saika ho ara-dalàna ao Sina” ny tranonkalany ary hatreto aloha dia mora foana ny dingana narahiny.
Mamaly an'i Robert Scoble avy ao amin'ny Microsoft ireo bilaogera Sinoa:
Milaza i Doubleaf izay mipetraka ao Beijing (voasoratra anarana, manoratra bilaogy ao amin'ny WordPress) fa na dia mety nihaona tamin'ny Sinoa mpitsikera ny demaokrasia Amerikana aza i Scoble, eritreritra adala ny tonga dia handravona fa hoe manohitra ny fahalalahana haneho hevitra ny Sinoa. “Olombelona koa ny vahoaka Sinoa, ahoana moa no tsy hitiavanay ny fahalalahana sy ny demaokrasia? Voasoratra amin'ny tarehintsoratra mainty ao anatin'ny pejy fotsin'ny Lalam-panorenan'ny Repoblikan'i Sina ireo teny hoe “fahalalahana” sy “demaokrasia”. Manasongadina izy fa na ny fitambaran'ireo mpitantana an'i Sina amin'izao fotoana izao aza dia mampiasa ny tenin'ny demaokrasia. … 毫无疑问，中国人也是人，对民主自由等人类共同的财产有着天生的向往。Tsy misy isalasalàna fa vahoaka ihany koa ny Sinoa, ary manana fikasàna natoraly amin'ny zavatra toy ny demaokrasia sy ny fahalalahana izay fananana iombonan'ny olombelona.” Mariho fa misoratra anarana ara-dalàna ao Beijing ny bilaogin'i Doubleaf ary mampiasa ny teny “fahalalahana” sy “demaokrasia” imbetsaka ao amin'ny bilaoginy izy. Mariho ihany koa fa afaka atao ny mampiasa ireny teny ireny no sady tsy voatery mitsikera ny fitondrana ankehitriny – izay ataony tsara.
Mibedy an'i Scoble i Hopesome (voasoratra anarana ara-dalàna ao Fujian): “Tsy manana lalàna na fitsipika na dia iray monja aza i Sina milaza fa ny teny saropady toy ny “demaokrasia” sy ny “fahalalahana” dia tokony ho voarara.” Manohy izy: 而且，许许多多的中国人关于民主和自由的理解和世界上其它国家，包括美国，的理解并没有本质的区别。”Ambonin'izay, tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fomba fahazoan'ny Sinoa maro ny demaokrasia sy ny fahalalahana sy ny fomba fahazoan'ireo olona maneran-tany izany, tafiditra ao anatin'izany ireo Amerikana. ” (Mbola mariho indray fa mitoraka bilaogy avy ao Sina aminà lohamilina Sinoa, ao aminà bilaogy misoratra anarana ara-dalàna i Hopesome.)
Manasongadina i Li Dan (manoratra amin'ny teny Anglisy) fa miseho matetika ihany ao amin'ny tranonkalam-baovaom-panjakana Xinhuanet ny teny “demaokrasia” sy “fahalalahana”.
Ny olana efa hatry ny ela misy eo amin'i Sina sy Microsoft:
Ny zavatra iray mety tsy ho tsikaritry ny olona maro dia manana olana ara-pifandraisana amin'ny vahoaka ao Sina efa hatry ny ela ny Microsoft, ary tena goavana be any amin'ny ampahany sasany amin'ny fitondram-panjakana Sinoa ny “fanoherana ny fibodoan'ny Microsoft” (izay tsy te hiankina be loatra amin'ny rindrambaiko vahiny ary misafidy kokoa ireo rafitra miankina amin'ny Linux noho ny olana eo amin'ny fiarovam-pirenena) ary koa eo anivon'ireo teknisiana sy bilaogera Sinoa tsy miankina izay sahirana amin'ny fifantohanà fahefana be loatra ao anatinà orinasa vahiny mpamokatra rindrambaiko – izay inoan'ny maro fa manakenda ny fipoiran'ny indostrian'ny rindrambaiko ao an-toerana.
Mampahatsiahy isika ity resaka ity ny lahatsoratra lava iray tao amin'ny Klogs.org (amin'ny teny Sinoa, miantrano ao Etazonia), izay manoritra ny tsy fitiavan'ireo bilaogera Sinoa sy ny governemanta Sinoa ny Microsoft nandritra ny fotoana ela. Manondro lahatsoratra iray izy, izay navoaka tao amin'ny tranonkalam-bilaogera iray nitaraina fa tsy ara-dalàna ny tolotry ny MSN Spaces mikasika ny bilaogy satria tsy nanaraka ireo dingana fisoratana anarana izay tsy maintsy narahin'ireo orinasa mpampiantrano bilaogy hafa izy.
Manondro mankany amin'ilay blaogy Chinese Center for the Study of Blogs izy avy eo, izay manohana ihany koa fa tsy ara-dalàna ny MSN Spaces. Fandikàna ampahany kely avy amiko:
Hoy ny fomba fiteny taloha hoe: Rehefa any Rôma, manaova toy ireo Rômanina [dikanteny kitoatoa an'ilay ohabolana]. Raha toa ka andeha hilalao eo amin'ny sehatry ny varotra ianao dia tsy maintsy manaraka ireo fitsipika. Raha toa ka te hilalao eo amin'ny tontolon'ny bilaogy aty Sina ny MS, tsy maintsy manaraka ny fitsipika izy, sa tsy izany?
Kanefa tsy nanaraka ny fitsipika ny MS. Mandrara ny firotsahan'ireo vahiny mpampiasa vola anatin'ny tolotra fanomezam-botoaty an'Aterineto ny fitsipiky ny governemanta Sinoa, ary tsy mahazo alalana ny hampivoatra tolotràna bilaogy amin'ny maha mpamatsy votoaty an'Aterineto azy ny MS (ICP). TMazava ho azy fa tsy vonona hanaiky izany ny MS, etsy an-daniny, te hiolaka izany fitsipika izany amin'ny fiaraha-miasa aminà tranonakala Sinoa iray izy; etsy an-kilany kosa, milaza mafy ary mampiroborobo avo sy amin-kery ireo bilaogy MSN izy, manantena fa raha toa ka manao dingana mavitrika ary manintona mpampiasa Aterineto maro izy dia hamorona fait accompli. Tsotra be tahaka izany ny lôjikan-dry zareo, vao mahazo isanà Sinoa mpampiasa maro izy, hihamafy ny toeran'ny MS eo amin'ny fifanarahana amin'ny governemanta Sinoa.
Inona no lazain'ny MS ao anatin'ny fifanarahany amin'ny governemanta Sinoa?
Moa tsy momba ny fakàna tsenanà rindrambaiko bebe kokoa amin'ny anjaran-tsenan'ireo rindrambaiko Sinoa? Sa hoe mikasika ny fiarovana ny rakitra aty Sina?
Na mikasika ny fampidinana ny vidin'ny Windows, mba hahafahan'izy ireo mamokatra vola bebe kokoa amin'ny alalan'ny asan'ireo mahantra? Iza no mahalala.
Ity misy hevitra mitovy amin'izany izay nosoratan'ny fikambanana iray antsoina hoe “Firaisan'ny Bilaogera mba Hanoherana Ny Fibodoan'ny Microsoft” (反微软垄断博客同盟). Ity no fanambarana ny fikasàn'ilay vondrona. Zavatra bebe kokoa mikasika ilay vondrona eto sy eto.
Raha toa ka misy te hirotsaka an-tsitrapo handika ireo zavatra amin'ny teny Sinoa ireo ho amin'ny teny Anglisy manontolo, azoko antoka fa hanampy hanazava ny zavatra manodidina ny tsy fahombiazan'ny MSN Spaces anatin'ny fifandraisany amin'ny vahoaka izany.
Myanmar (Birmania) 3 andro izay
Japana 5 andro izay